Daawo: Shabaab Muqdisho ku dilay 180 qof oo lasoo bandhigay – Hornafrik Media Network
Daawo: Shabaab Muqdisho ku dilay 180 qof oo lasoo bandhigay
Somali NewsTOOSHKA HORNAFRIKVIDEO
Maxamed Xaaji Axmed oo loo yaqaano (Ilkacase) iyo 9 kale oo ka tirsan Al-Shabaab, islamarkaana shan ka mid ah ay yihiin maqanayaal, ayaa maanta dacwadoodu ka furantay maxkamadda ciidamada Qalabka sida Soomaaliya.
Ilkacase oo la sheegay inuu ka tirsanaa amniyaatka kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa loo heystaa dilka in ka badan 180 qof iyo fulinta qaraxyo uu ka mid yahay kii Tiyaatarka Qaranka oo ay ku dhinteen, Wariye Cawil Daahir Salaad iyo dad kale oo shacab ahaa.
Xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada, Gaashaanle Muumin Xuseen Cabdullaahi, oo ka hadlay hoolka ay ka socotay dacwadda, ayaa ka sheekeeyey, sida lagu soo qabtay afartaan eedeysane oo ay mid ka mid ah tahay qof Haweeney ah.
Muumin ayaa sheegay in marka hore ciidamada amniga ay gacanta ku soo dhigeen saddex ka mid ah eedeysanayaasha, kadib markii ay ku fashilmeen isku day dil oo ay ku khaarijin rabeen Haweeney ka mid ah eragadii wax ka soo dooratay xildhibaaanada Baarlamaanka federaalka Soomaaliya, taas oo ku sugneyd xaafadda Seybiyaano, gaar ahaan dhanka degmada Wadajir ee gobolka Banaadir.
Xeer ilaaliye ku xigeenka ayaa sidoo kale intaasi ku daray in baaris dheer kadib eedeysanayaasha ay sheegeen in Amiirkooda uu yahay Ilkacase, kaas oo ugu dambeyn isna la soo qabtay.
Sidoo kale maxkamadda ayaa sheegtay in Ilkacase uu lahaa magacyo kale oo been abuur ah, islamarkaana in muddo ah lagu raad joogay, waxaana ay tilmaamtay in horay loo soo qabtay rag la shaqeynayey oo qaarkood la xukumay, kuwana ay yihiin xukun sugayaal, halka kuwa kalena ay ka maqan yihiin gacanta dowladda.
Dhammaan eedeysanayaasha ayaa fadhiga maxkamadda ka hor qirtay inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab, welina waxaa socoto dhageysiga dacwadda loo heysto.
Hoos ka daawo warbixin ku saabsan kiiska maanta ee maxkamadda.
Maxamed Xaaji (Ilkacase) oo katirsan Amniyaadka AS, oo loohaysto dilka in kabadan 180 qof, iyo fulinta qaraxyo uu ka midyahay kii Tiyaatarka Qaranka oo uu ku shahiiday haldoor Cawil Daahir, ayaa asaga iyo Shabakaddiisa oo ka koobab 9 dhagarqabe lahorgeeyay Maxkamada CQS. pic.twitter.com/Tz7PAynVXt
— NISA (@HSNQ_NISA) December 26, 2019
Madaxweyne Farmaajo oo saxiixay laba sharci oo Baarlamaanku ansixiyeen